Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Tora-pasika Koety: al-Khiran - faritra fialantsasatra hialana
Ireo mpizahatany sy ny mponina any Koety dia tokony hijanona lavitra ny faritra fialantsasatra antsoina hoe al-Khiran any Koety.
Koety dia niady tamin'ny alahady mba hifehezana ny fiparitahan'ny solika any amin'ny morony atsimo izay nandoto ny morontsirak'izy ireo, nandrahona ny hanimba ireo toby famokarana herinaratra sy tobin-drano ary namela solila mainty lava tao amin'ny Golfa Persia.
Ny sambo sy ny mpiasa an-tsambo dia nametraka fipoahana tao anaty rano hanandrana sy hitazona ny fiparitahan'ny rano. Te hiaro ny lalan-drano, ny toby famokarana herinaratra ary ny fotodrafitrasa aloha ny tomponandraikitra, avy eo madio ny morontsiraka manodidina azy, araka ny tatitra navoakan'ny masoivohom-baovao KUNA.
Khaled al-Hajeri, ny filohan'ny Green Line Society Koesiana, dia nilaza fa ny fikambanana miahy ny tontolo iainana tsy mitady tombony dia miandraikitra ny governemanta amin'ny fahavoazana na ny fiatraikany ara-pahasalamana vokatr'izany.
"Hisy vokany lehibe ho an'ireo tompon'andraikitra amin'ity tranga ity, ary hanenjika azy ireo izahay," hoy i Sheikh Abdullah al-Sabah, mpikambana ao amin'ny fianakaviana mpitondra.
Ny manam-pahefana ao Arabia Saodita mpifanila vodirindrina dia nametraka drafitra hetsika vonjy maika hiatrehana ny fandrobana ary nanao fanadihadiana an'habakabaka ny faritra, araka ny fanambarana nataon'ny masoivohon'ny gazety Saudi Arabia.
Ny foibem-piaraha-miasa iraisana ao an-tanànan'ny tanànan'i Khafji, sisintany Saodiana dia nilaza fa tsy nisy fiantraikany tamin'izany ny tranobe tany.
Koety dia nilaza fa ny orinasan-tsolika amerikana Chevron Corp. sy ireo manampahaizana manokana momba ny kaontenera Oil Spill Response Limited dia nanampy tamin'ny fanadiovana. Chevron, miorina ao San Ramon, Kalifornia, dia miasa amin'ny sisiny roa amin'ny sisintany.
Ny faritra ao Koety dia misy ny tanimbary misy solika sy gazy voajanahary zarain'i Koety sy Saudi Arabia. Ny sasany amin'ireny saha malaza ireny dia nodoran'ny tafika Irakiana nihemotra tamin'ny fiaraha-mitantana notarihin'i Etazonia tamin'ny Ady Helodrano 1991 izay namarana ny fibodoan'ny Saddam Hussein ny firenena.
Godfather Of Custom B777: Matthew D. Upchurch